လေယာဉ်မတော်တဆမှုမှာ ခရီးသည်အားလုံးရဲ့ ကယ်တင်ရှင် လေယာဉ်မှူးကြီး မြတ်မိုးအောင် … ရှေ့ဘီး ချမရတာကို အမှန်ကန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီး မြတ်မိုးအောင် မန္တလေးမြို့ တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ယနေ့(မေ ၁၂) နံနက်ပိုင်းက Myanmar National Airlines မှ လေယာဉ်တစ်စီး မတော် တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ခရီးသည်များအားလုံးရဲ့ …
မိခင် အွန်လိုင်းသုံးနေတုန်း ကလေးတင်ထားတဲ့ ဘီးတပ်ထိုင်ခုံက လမ်းပေါ်လိမ့်ပြီး ကားတိုက် သေဆုံး(ရုပ်သံထွက်ပေါ်)
ဒီပို့လေးက ယမန်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ပို့လေးပါ..။ တစ်ချို့လူတွေက ပုံပဲပါတာဆိုတော့ သိပ်ယုံကြလို့ အခု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်လာလို့ ပြန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကျိုးရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို သင်ခန်းစာအနေနဲ့ မိခင်တိုင်း သတိရှိကြစေချင်ပါသည် မိခင် အွန်လိုင်းသုံးနေတုန်း ကလေးတင်ထားတဲ့ ဘီးတပ်ထိုင်ခုံက လမ်းပေါ်လိမ့်ပြီး ကားတိုက် သေဆုံး အွန်လိုင်းသုံးရတာ ပျော်ရဲ့လား မေမေ အွန်လိုင်းကို …
ကလေးသူခိုး တစ်ယောက်မိထားသော်လည်း အဖွဲ့လိုက်ရှိနေသေးလို့ မိဘများ ဂရုစိုက်ကြပါ …
ကလေးသူခိုး တစ်ယောက်မိထားသော်လည်း အဖွဲ့လိုက်ရှိနေသေးလို့ မိဘများ ဂရုစိုက်ကြပါ … ကလေးမိဘများဂရုစိုက်ကြပါ …။ ကချင်ပြည် ဖားကန့် မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စုကောင်စံ ၇ပ်ကွပ် ( ၄ ) အိမ်အမှတ် /၉၁ ကျောက်ဝယ်ဟန်ဆောင်ပြီးကလေးခိုးသည့်သူအားဒေသခံ စည်လုံးအင်အားနဲ့ ဖမ်းမိခဲ့သည် အဖွဲ့လိုက် လာသည်ဟုဖော်ထုတ်ချက်အရ သိရှိ ဆိပ်မူ မှော်၇ှန်မှာ အဖွဲ့လိုက် ရှိနေကြောင်းသိရသည် ။ …
ဒီနေ့ သေဘေးကလွတ်ခဲ့တယ်ဒါ ကျွှန်မစီးလာတဲ့လေယာဉ် ပ ထ မ လေယာဉ်မယ်ကျေငြာတဲ့အချိန်မှာ ဒူးတွေတုန်နေပြီ ဘုရားစရွတ်ပေမယ့် သေရတော့မယ်ဆိုတာ တွက်ထားလိုက်တယ် ကိူယ့်ခုံ 8 A ဘေးမှာက အင်ဂျင်ကြီးရှိတယ် ရေထဲဆင်းဖို့လုပ်တယ် ပထမ ငါရေမကူးတတ်ဘူးလေ နောက်ဆုံးလေယဉ်မူးက ကုန်းပေါဆင်းမယ် ကြေငြာတယ် ဒါပေမယ့် မီးလောင်နိုင်တယ် နောက် ဆုံး ကြေငြာအပြီးမှာ ဖိနပ်ချွှတ်တယ် တရားမှတ်တယ် …
ဘဝမှာ အရာရာကို တစ်ယောက်ထဲဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်ကတော့ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဘဝမှာ ခံပြင်းစိတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ပိုပိုကတော့ ယခုဆိုရင် အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝကို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကိုဝမ်းနည်းမှုများစွာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် ပိုပိုကိုကတော့ ယနေ့ အမေများနေ့မှာ သူများတွေ အမေနဲ့တွဲလို့ ရိုက်ထားတဲ့ …
ဒီကနေ့ ..သာသနာ့ဘောင်သို့ ..ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့… သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်
သ ရုပ်ေ ဆာင် မိုးအောင်ရင်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁၂) ရက်နေ့ ခရိုင်တရားရုံးကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု ပုဒ်မ ၁၉(က)နဲ့ ထောင်ဒဏ်(၁၂)နှစ် ချမှတ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေသိပြီး ဖြစ်မှာပါ နို ဝင် ဘာ(၂၆) ရက်နေ့ကလည်း ပုဇွန်တောင် တရားရုံးကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၆(ဂ)ဖြင့် အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ် ကျခံဖို့ အမိန့်ချခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် မိုးအောင်ရင်ဟာ စုစုပေါင်း …
လာပြန်ပြီ မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြဲနေလို့ မသုံးရဘူးပြောတဲဘ ချောက်/ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာ တံတာ ဂိတ် တဲ့ အစက ဒီ video မရိုက်ဘူးနေခဲ့တာ ကားကို ဒီထဲမှာပါတဲ့ အကျီင်္အမဲနဲ့ အမက အုတ်ခဲနဲ့ ထုမယ်လုပ်တယ် အ့ဒါကြောင့် ဒီ video လေးရိုက်ခဲ့တာပါ ကျတော်တို့ကားက မနက် ၁၀:၃၀ ဝန်းကျင်က ချောက် ဆိပ်ဖြူ …
မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျနော်နေပါတယ်…. မသွားနဲ့မလာနဲ့လို့တော့ကျနော်မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမဲ့အရေးတကြီးသွားရမယ်ဆိုတော့သတိလေးနဲ့သွားလာကျပါ…ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သက်သက်ကြီးတော့မသွားကျပါနဲ့လို့ကျနော်အသိလေးပေးပါရစေချစ်သောမိတ်ဆွေ… ၁၀.၅.၂၀၁၉ည၇နာရီ၄၉မိနစ်အချိန်တွင်၇၈လမ်းကနေ၃၈လမ်းစကွေ့ခါစရှိသေးအနောက်ကနေဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးပစ်ကျပါတယ ကျနော်တို့ညီကိုသူတို့နဲ့ရန်ညှိးရန်စလဲမရှိပါဘူးဗျာ ..အဲ့နေ့ကကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အပြင်ထွက်မိတာပါ…ဘာရန်ညှိးရန်စမှမရှိပါဘူး….သက်သက်မဲ့ကိုလိုက်ပြီးလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ…ပထမတစ်ချက်ပစ်တော့သတိမထားမိဘူးသြော်ကားကဂဲနင်းမိလိုချော်မှန်တာပဲနေမှာပါဆိုထားလိုက်တယ်… နောက်တစ်ချက်ခါးကိုမှန်တယ်..ဒါသွေးရိုးသားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ချိန်မျက်နှာကိုMaskအုပ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်၂စီးနဲ့လူ၆ယောက်အဖွဲ့ကကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ပစ်နေတော့တာပဲ ဒါနဲ့ကျနော်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းတောင်းပန်တာပေါ့အကိုတို့ဘာလိုချင်လို့လဲဆိုင်ကယ်လိုချင်လို့လားဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံတို့လိုချင်လို့လားမေးတော့သူတို့ကမင်းစောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားဆိုပြီးလေးဂွနဲ့ပါးစပ်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်…ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကွဲပြီးသွားတွေလဲကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်.. အဲ့နာနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသံလမ်းကျော်အောင်မောင်းပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကူညီတောင်းပါတယ်..ကျနော်တို့လေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေလို့ကူညီပါဦးလို့ပြောတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကကျနော်တို့ကိုမျက်နှာလွဲဂဲပစ်မသိဟန်ပြုပြီးရှောင်တိန်းထွက်ခွားသွားကျပါတယ် အဲ့အချိန်သူတို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးလေးဂွတွေနဲ့ပစ်ကျပါတယ်ကျနော့်ညီကတော့နောက်ကျောတပြင်လုံးသူတို့ပစ်တဲ့ဖန်ပေသီးအရာစက်ဘီးဂုန်းတွေမူလီတွေအစရှိတာတွေနဲ့ပစ်ခက်ချင်းကိုလဲခံရပါတယ်…… မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးကျနော်တို့ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးပြီးကျနော်တို့နေတဲ့ဘက်ကိုဇွတ်အတင်းမောင်းနှင်လာခဲ့တယ်…တစ်လမ်းလုံးကယ်တော်မှုကျပါဦးကျနော်တို့ကိုလေးဂွတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်နေကျပါတယ်လို့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းသော်ညားလဲများပြာလှတဲ့လူတွေကတုပ်တုပ်မျှမလှပ်ပဲသူတို့လမ်းသူတို့သွားပြီးရှောင်ကွင်းသွားကျပါတယ် ကူညီမဲ့သူမဲ့နေတဲ့ကျနော်တို့ညီကို၂ယောက်မဖြစ်ဖူးသူတို့လက်ထဲတော့အသေမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျနော်တို့နေတဲ့စိန်ပန်း၄၁လမ်းလမ်းကြီးပေါ်ရအောင်မောင်းခဲ့ပါတယ်….ကျနော်တို့ကိုဘယ်မှပြေးမရအောင်ဆိုင်ကယ်၂စီးညှပ်ပြီးလိုက်ပစ်ပါတယ်..ဘယ်မှလဲဝင်မရဘူးဘ်ာသူ့မှလဲအကူညီမတောင်းလိုက်ရတော့ဘူး. နောက်ဆုံးဘီယာဆိုင်ထဲကိုထိုးဝင်လိုက်တယ်…ကျနော့်ညီဆင်းပြေးဘီယာဆိုထဲဝင်အကူညီတောင်းတယ်…တသ်ယောက်မှမကူညီသောက်မြဲတိုင်းသောက်နေကျတယ်…အဲ့အချိန်မှာဆိုငကြယ်ရပ်ပြီးကျနော်ဆင်းပြေးမယ်အလုပ်သူတို့လမ်းပစ်လိုက်တယ်..ကျနော့်မေးရိုးကိုထိမှန်သွားတယ်… အဲ့ဒီမှာကျနော်မျက်လုံးတွေပြာထွက်သွားပြီးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး…ဆိုင်ကယ်ပေါ်ခွရပ်ကြီးနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆက်ပစ်လိုက်တယ်ကျနော်နားအုံပွင့်သွားတယ်ကျနော်လဲဆိုင်ကယ်နဲ့ထပ်ရပ်ကြီးလဲနေတဲ့အချိန်ဆက်ပစ်ပါတယ်ကျနော့်ညီလဲအကူမရတဲ့အဆုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဂဲတွေကောက်ပြီးကျနော့်ကိုပစ်နေတဲ့လူတွေကကိုလှမ်းပစ်နေတယ်.. အဲ့အချိန်မှဘီယာဆိုင်ထဲကလူတွေဝိုင်းအုံပြီးထွက်လာကျတယ်…ဒါမှကျနော်လဲသူတို့ရဲ့အသက်ဘေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်..သွေးတွေစီးအိုင်ကျနေတဲ့ကျနော့်ကိုကောက်ထူးရင်းဘေးမှာရှိတဲ့ ၂၄နာရီဆေးခန်းကိုကျနော့်ညီကဆွဲခေါ်သွားတယ်. ဆေးခန်းထဲအရောက်မှာသေမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ကျနော်ကိုဆေးခန်းထဲကဆရာမကရောက်ရောက်ချင်းစောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပဲရှင့်ကိုကျမဆေးကုမပေးမနိုင်ဘူးတဲ့ရှင့်ဆေးရုံကြီးသွားမှရမယ်တဲ့ဒါဆိုလဲဆရာမယ်သွေးတိတ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပြီးပြောတော့ဂွမ်းလေးနဲ့ဖိပေးလိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တာတောင်သူ့ရဲ့အကူသူနာပြုကလုပ်ပေးလိုက်တာသူကတော့ဖုန်းပွတ်နေလေရဲ့ကျနော်သူတို့ကိုပစ်တင်ဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘာလို့အကျင်နာတရားခေါင်းပါးနေကျတာလဲဘာလို့မကူညီချင်တာလဲဆိုပြီးအတွေးတွေဝင်ရောက်လာတယ်..တစ်လမ်းလုံးကလူတွေကလဲမကြားတာလား?မမြင်တာလားဆိုပြီးတွေးမိတယ်..သွေးလွန်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာလာတဲ့နောက်ဆုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးမန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုအရောက်သွားရတော့တယ်… ရောက်တော့လူနာစာရင်းတင်မေးတာဖြေနေရတယ်ဆေးမထည့်ပေးသေးဘူးချုပ်လဲမပေးသေးဘူး…သူတို့မေးသမျှကိုအရင်ဖြေပေးနေရတယ်…ကျနော်နားလည်ပေးပါတယ်အဲ့တာတွေကိုနောက်ဆုံးချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အပ်ကိုနှမျောလို့တဲ့ကျနော်အမေကိုအပ်သွားဝယ်ခိုင်းတယ်…ဝယ်ပြီးပြန်လာတော့လဲသူ့အပ်နဲ့ပဲချုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးချုပ်ပေးတယ်..သေရမယ်နာတွေဆိုသေနေလောက်ပြီ သူတို့လုပ်နေတာနဲ့တင်ချုပ်လဲပြီးရောမှု့ ခင်းရဲရောက်လာပါလေရောကျနော့်ကိုနာမေးတယ်အသက်မေးတယ်ဘယ်မှာနေတာလဲမေးပြီးရောဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒဏ်ရာရတာလဲတဲ့မေးတယ်…၇၈လမ်း၃၈လမ်းထောင့်လို့လဲပြောရောဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး… သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်နေတယ်သူ့တာဝန်မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့စတိုင်ကြီးနဲ့လစ်သွားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့နေရာထိလိုက်မေးတယ်….ကျနော်လဲဓာတ်မှန်သွားရိုက်မယ်အလုပ်ဘေးကပြောသံလေးကြားလိုက်တယ်….မနေ့ကလဲအဲ့လိုပဲလေးဂွနဲ့လိုက်ပစ်ခံရလို့အမှတ်( ၉ )ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တာတဲ့လေးဂွနဲ့ပစ်တဲ့အမှုတွေများ နေပြီတဲ့ကျနော်တို့ဘယ်လိုက်ဖမ်းရမှာလဲတဲ့…? ကျနော်ပြောချင်တာကရဲဆိုတဲ့အမျိုးကဘယ်နေရာမှာလူမိုက်ရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာသူခိုးဂျပိုးရှိတယ်…?ဘယ်နေရာမှာမူးယစ်သူရှိတယ်ဆိုတာသူတို့အပိုင်သိပြီးသားပါဗျာ…အခုဟာကတာဝန်မဲ့တဲ့စကားကြီးပြောထွက်ရက်တယ်…သူတို့ဖမ်းချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုကြီးတာဝန်မဲ့စကားတော့ပြောမထွက်ရက်သင့်ဘူး…?ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့သေချာစုံစမ်းပေးပါ့မယ်အမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်အမြန်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်အားရအောင်တော့ပြောပေးသင့်ပါတယ်….. ကျနော်မဖြစ်ခင်သတင်းတစ်ခုကြားမိသေးတယ်…မြစ်သစ်ဘက်မှာလဲလူရိုက်ပြီးလုပြေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုပြာ်သူတွေကဝိုင်းဖမ်း ရဲလက်ကိုအပ်ခဲ့ကျတယ်တဲ့မကြာပါဘူးမနက်မိုးလင်းတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဗျာ…ကျနော်တွေးမိတာလေးပေါ့ဗျာ အဲ့ဆိုအဲ့လုယက်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတွေနဲ့ကရသမျှကိုတဝက်စီယူပြီးလုပ်စားနေကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပိုက်ဆံရှိသားသမီးတွေကဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးအဲ့ထဲကိုလိုလိုက်လုပ်ရဲနဲ့ပူးပေါင်းတဝက်စီခွဲယူ…ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရဲတွေကိုပြန်ပြီးခြိမ်းခြောက်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ရဲသားသမီးတွေလားလို့ကျနော်တွေးမိတယ်…. ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်ရဲကိုအဖေခေါ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုအားကိုးရတော့မှာလဲဗျာ…ထိခိုက်နစ်နာနေတဲ့ကျနော်တို့လိုပြည်သူတွေလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကျတော့မှာလား..?ကျနော်တို့ပြည်သူတွေသေပေးရတော့မှာလား….?အခုလိုချိန်မှာခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေဆိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကျမှာလာ….? …
ဘီးမကျတဲ့ လေယာဉ်ကိစ္စ မြန်မာ့ အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ဘီးမကျတဲ့ လေယာဉ် ကိစ္စ မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ထုတ်ပြန်ချက် ယနေ့ ၁၂/၀၅/၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၀၇၁၅နာရီတွင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း ၏ခရီးစဉ်အမှတ် UB103 ရန်ကုန်- မန္တလေး- ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို လေယာဉ်အမှတ် XY-AGQ , Embraer 190AR နှင့် ခရီးသည် ၈၂ ဦးတင်ဆောင်၍Captain မြတ်မိုးအောင်၊ FO ကောင်းဆက်လင်း၊ FOမျိုး သီဟအောင်၊ cabin …
ဘီးမကျတဲ့ လေယာဉ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
ဘီးမကျတဲ့ လေယာဉ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် လေးစား ချီးကျူးစရာ လေယာဉ်မှုးကြီးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကျန်းမာဘေးကင်း ကြပါသည်🙏 ချစ်ရသူများခင်ဗျာ ဘဝမှာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ၊ ကံသီပေလို့ပေါ့။ အရေးပေါ်ချွတ်ယွင်းပြီး ရှေ့ဘီးချမရလို့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားမောင်းနှင်ပြီးမှ မရတော့တဲ့အဆုံး လေယဉ်ဆီကုန်ခါနီးမှာ နောက်ဘီးတွေမှေးချပြီး အရှိန်နဲ့ရှေ့ဝမ်းပိုက်နဲ့ရှောဆင်းခဲ့တာ မီးခိုးလေးတွေနည်းနည်း ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ အရေးပေါ်အမြန်ဆင်းပြေးခဲ့ရတာ အားလုံးကံကောင်းခဲ့ကြပါတယ် MNA …